Fanendrena loholona : hahitana fifandanjan’ny olona eto Madagasikara | NewsMada
Fanendrena loholona : hahitana fifandanjan’ny olona eto Madagasikara
“Hahitana ny fifandanjana amin’ny olona rehetra eto Madagasikara, indrindra izay tokony ho solontena eo anivon’ny Antenimierandoholona avy amin’ny ampahany tendren’ny filohan’ny Repoblika izany.”
Io ny fanazavan’ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza, momba ny fanendren’ny filohan’ny Repoblika ireo loholona enina mialoha ny fivoriana manokana hataon’ny Antenimierandoholona. Inoana fa efa miomana amin’izany ny filohan’ny Repoblika, ary efa mitsinjo ny olona rehetra izay tokony hapetraka amin’izany tsy mitanila.
Miova ny lalàna momba ny Antenimierandoholona. Ankoatra ireo loholona voafidy izay efa voambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ofisialy, misy ireo loholona tendren’ny filohan’ny Repoblika mivantana amin’ny alalan’ny didim-panjakana.
Araka ny lalàmpanorenana sy ny lalàna, manao fivoriana manokana ny Antenimierandoholona hametrahana ny birao maharitra sy ny filohan’izany andrimpanjakana izany. Amin’izay koa no hametrahana ny fitsipika anatiny. Tsy maintsy mbola halefa hodinihin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ny fitsipika anatiny. Amin’ny 19 janoary ho avy ny hanaovana izay fivoriana manokana izay, ary amin’ny 25 janoary ny famindram-pahefana eo amin’ny filoha sy ny birao maharitra eo anivon’ny Antenimierandoholona.